EVY's Kitchen: May 2010
Posted by Evy at 5:40 PM3comments:
Posted by Evy at 10:42 PM 1 comment:
Posted by Evy at 9:58 PM2comments:
Yesterday session was the last session for Cake Principles at BITC. We baked total of 16 cakes (including this Pandan Kaya Cake) in this21/2 months duration. I really enjoyed it. As long as baking is concerned, I am always very active to participate..I hope I can bake at least once inaweek on my own as well.
Below is my cert and I will try to continue my baking journey at BITC
Posted by Evy at 10:35 PM 12 comments:
Posted by Evy at 12:29 PM2comments:
ခုရက်ပိုင်း ဟင်းမချက်ဖြစ်တာအတော်ကြာနေပါပြီ။ တင်စရာ ဘာမှမရှိတဲ့အဆုံး အရင် ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မွှေနှောက်ရှာရင်းနဲ့ တွေ့ပါပြီ။ မတင်ရသေးတာလေးတစ်ခု။ Facebook က အစ်မတစ်ယောက်လုပ်တာ ကိုသဘောကျတာနဲ့ လိုက်လုပ်ထားတာပါ။ ဘယ်သူလုပ်တာလည်းတော့ နာမည်အတိအကျ မမှတ်မိတော့လို့ မထည့်တော့ဘူးနော်။
လုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ်။ ကြက်သားကြိတ်သားကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နဲ့ နယ်ထား။ ပြီးရင် ကြက်သွန်နီနဲ့ ဆီသတ် ၊ ပြောင်းဖူလေးတွေပါထည့်ပြီး မီးပေါ်မှာ ၃မိနစ်လောက်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် မုန့်ဖုတ်တဲ့ ဗန်းထဲဖြန့်ထည့်ပေးထားပါ။
အာလူးပြုတ်ပြီးသားကို ညက်ညက်ခြေပေးပါ။ ပြီးရင် ခုနက ကြက်သားဗန်းပေါ်မှာ တစ်ထပ်ဖြန့်ခင်းပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီ oven မှာ မိနစ် ၄၀လောက်ဖုတ်ရင်ရပါပြီ။
ဒါကကြက်သားနဲ့ ပြောင်းဖူး။ အာလူး မခင်းခင်ပုံ
Pie နဲတွဲစားဖို့ sauce ကိုတော့ ခါတိုင်း ကြက်သားနဲ့ စားရင်လုပ်တဲ့ sauce အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆီ လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ၂ဇွန်းကို ဆီသတ် ပြီးရင် ဂျုံမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း ကိုထည့်။ နဲနဲညိုလာတဲ့ အထိမွှေပေး ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်ထည့် ရေ နဲနဲထည့် ပြီး ဆူအောင်ထား ရင်ရပါပြီ။
ပြီးရင်ပန်းကန်ထဲမှာ sauce လေးကိုထည့်၊ veggi လေး နဲ့ Cottage pie ပြင်ပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ။ တကယ့် cottage pie ကတော့ ဒီလို အသီးအရွက်၊ sauce နဲ့တွဲစားမစားမသိပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကို Modify လုပ်လိုက်တာ၊ စားလို့တော့ကောင်းသား။
Posted by Evy at 10:53 AM No comments:
Posted by Evy at 10:50 PM4comments:
Posted by Evy at 10:51 AM No comments: